कोरोना भाइरस महामारी: पछिल्लो २४ घण्टामा कहाँ कतिको मृत्यु ? | Khabar Express Tv
खबर एक्सप्रेस २०७६-१२-१५ १०:३३ मा प्रकाशित Total Shares: 27
काठमाडौं - विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अथार्त् कोभिड १९ को संक्रमण १९९ देशमा फैलिसकेको छ । चीनको वुहानबाट फैलिएको भाइरसले २७ हजार बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने करिब ६ लाख मानिसममा संक्रमण रहेको छ ।
यो समाचार तयार पार्दा सम्म करिब १ लाख ३० हजार बिरामी निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको वल्डोमिटरले जनाएको छ । यो भाइरसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुक हो, इटाली मृतकको आधारमा । संक्रमितको आधारमा भने अमेरिका पहिलो स्थानमा छ ।
अमेरिकामा १ लाख बढी संक्रमित भइसकेका छन् । यस्तै इटालीमा पछि मृत्यु हुनेको संख्या ९१३४ पुगेको छ । जुन चीनमा कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेको तेब्बर संख्या हो । चीनमा ३२९५ को मृत्यु भएको छ ।
यस्तै अर्को युरोपेली देश स्पेनमा पनि कोरोना तिव्र गतिमा फैलिएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा स्पेनमा ७७३ जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ । वल्डोमिटरका अनुसार अहिलेसम्म इटालीमा ५ हजार बढीको मृत्यु भएको छ भने ५०हजार बढी संक्रमित भएका छन् । यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा अमेरिकामा ४००, इरानमा १४४, बेलायतमा १८१,फ्रान्समा २९९ को मृत्यु भइसकेको छ ।
हेर्नुहोस्, पछिल्ले २४ घण्टामा कहाँ कतिको मृत्यु भयो ?
दक्षिण कोरिया -८